Fironanana vonjimaika: mitarika hatrany amin’ny voka-pifidianana ny kandidà A. Naina | NewsMada
Fironanana vonjimaika: mitarika hatrany amin’ny voka-pifidianana ny kandidà A. Naina
Fanambarana ny voka-pifidianana vonjimaika sy ofisialy sisa. Mitarika hatrany ary tombanana tsy hisy fiovana intsony ho eo amin’ny toeran’ny ben’ny Tanàna ny kandidàn’ny IRK, Andriantsitohaina Naina, amin’ny fifidianana eto Antananarivo Renivohitra. Nahazo ny salanisa 48, 80% ity kandidà laharana fahefatra ity raha ny fironana vonjimaika, navoakan’ny Ceni, omaly tamin’ny 4 ora sy fahefany hariva. Efa madiva ho vita ny fanisam-bato na efa vita izao maraina izao raha tsy misy ny fiovana. Nahazo ny isam-bato 45, 57 % kosa ny kandidàn’ny Tim, Randriamasinoro Ny Riana, laharana faharoa amin’ny biletà tokana. Eo amin’ny laharana fahatelo ny kandidàn’ny APM, Rakotoarisoa Faniry Alban (Babà-Ganstabab). Nahazo ny salanisa 4,47% raha 0,74 ny vato azon’Andrianjoelina Feno. R. Eliace, kandidà laharana voalohany nahazo ny 0,43%. Nahazoana ireo voka-pifidianana ireo ny birao fandatsaham-bato, 1 173 amin’ireo 1 202 eto Antananarivo Renivohitra. Voakirakira kosa ny 1 050.
Mitarika ny mpanolontsaina Tim
Ho an’ny mpanolotsaina kosa, tery ny elanelan’ny vato azon’ny IRK sy ny Tim. Mitarika ny avy amin’ny Tim, Randrianary Roberto. Nahazo 45,51% raha 45,03% kosa ny avy amin’ny IRK, Raharinirina Clemence. Mety hahatafiditra mpanolotsaina ny tsy miankina, Ralambomahay Toavina, nahazo ny 5,51%. Manodidina ny 22% eo ho eo kosa ny taham-pahivitrihan’ny mpifidy ho an’Antananarivo Renivohitra.
Ho an’ny any Toliary I indray, mitarika vonjimaika ny kandidà ben’ny Tanàna avy amin’ny IRK, i Dede Sidison Vita. Nahazo ny 46% raha manaraka akaiky azy eo ny tsy miankina, Ratsimbazafy Romeo amin’ny salanisa, 37%. Any amin’ny fahatelo ny laharan’ny Tim.
Tsiahivina fa fironana vonjimaika ihany ireo voka-pifidianana ireo.